Shuruudaha Adeegsiga - Caymiska Caafimaadka Maxalliga ah ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Shuruudaha Isticmaalka
Fadlan aqri shuruudaha adeegsiga kahor intaadan isticmaalin degelkeena.
Faahfaahin intaa ka badan
Waa maxay sababta CHPW?
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington (halkan loo yaqaan 'CHPW') ayaa ku cusbooneysiiya macluumaadka websaydhkeeda si ay macluumaadka ugu sii hayso sida ugu habboon uguna macquulsan; si kastaba ha noqotee, fadlan waxaa lagugula talinayaa in websaydhku ku jiri karo khaladaad, khaladaad, ama wax ka beddellada aan la oggolayn ee dhinacyada saddexaad. CHPW ma sameyso wax damaanad qayaxan ah oo ku saabsan sax ahaanta macluumaadka boggeeda internetka.
Xidhiidh kasta oo aan ku xirnayn non-CHPW, dhinac saddexaad, ama websaydhada lamaanaha ayaa loogu talagalay ujeeddooyin waxbarasho waxaana loogu talagalay inay kuugu habboon tahay helitaanka macluumaadka la xiriira. CHPW ma maamusho waxyaabaha ku jira websaydhada sidaas darteedna ma caddeyn karto sax ahaanta ama dhammaystirka macluumaadka ay bixiyeen ama ku saabsan bogaggaas. Ku darid ama xusid kasta oo goobta dhinac saddexaad ah ma aha mana ka dhigan tahay talo bixin cad ama oggolaansho ah CHPW. Shuruudo iyo shuruudo kaladuwan ayaa laga yaabaa inay quseeyaan websaydha kasta oo isku xidhan.
Macluumaadka lagu soo bandhigay websaydhkeenna waxaa loogu talagalay ujeeddooyin macluumaad iyo waxbarasho ah oo aan sinnaba u ahayn dalab in la iibiyo ama weydiisasho la xiriirta adeeg kasta. Ujeedada bartayadu waa kaliya inay ku siiso macluumaad lagama maarmaan ah oo ku saabsan qorshayaasheena daryeelka caafimaadka iyo faa'iidooyinka iyo adeegyada la xiriira wax soo saarkeena. Haddii aad xiisaynayso mid ka mid ah qorshayaasheena daryeelka caafimaad ama adeegyada, fadlan nala soo xidhiidh.
Badal uma ahan daryeel caafimaad xirfadle ah ama talo
Macluumaadka lagu bixiyay boggan waa mid guud ahaan guud ahaan loogu talagalay waxaana loogu talagalay ujeeddooyin waxbarasho oo keliya. Ma aha beddelka talooyinka xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka. Haddii aad leedahay baahiyo daryeel caafimaad oo gaar ah ama su'aalo, fadlan la xiriir dhakhtar ama bixiye daryeel caafimaad kale.
CHPW waxay cusbooneysiin kartaa ama wax ka beddeli kartaa macluumaadka boggeeda internetka waqti kasta. Waqti kasta oo la bixiyo, macluumaadka waxaa laga yaabaa inuu noqdo mid waqtigiisu dhacay. Haddii aad dareento inaad la kulantay bog leh macluumaad duug ah ama aan sax ahayn, fadlan nala soo socodsii.
Lahaanshaha, rukhsadda, iyo xaddidaadda isticmaalka qalabka
Waxyaabaha ku jira bogagga internetka ee CHPW (oo ay ku jiraan, iyada oo aan la xadidin, qoraal, naqshadeyn, sawir gacmeedyo, astaamo, sawirro, fiidiyowyo, iyo sidoo kale xulashadeeda iyo qaabayntiisa) ay soo gelisay CHPW waa milkiyad iyo milkiyad ay leeyihiin CHPW, shatiyeyaashayaga, ama dhinac saddexaad bixiyeyaasha mawduucyada. Dhammaan waxyaabahaas iyo waxyaabahaas oo dhan waxaa ilaaliya xuquuqda daabacaadda, astaan ​​ganacsi, iyo sharciyo kale oo khuseeya. Isticmaal kasta oo kale oo ah waxyaabaha ku jira goobta, oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn, wax ka beddelka, qaybinta, gudbinta, waxqabadka, baahinta, daabacaadda, soo dejinta, shatiyeynta, wareejinta, ama iibinta, ama abuurista shaqooyin ka soo jeeda, wixii qalab ama macluumaadka laga helo goobta, ama isticmaalka goobta ujeeddooyin la tartamaya CHPW, ayaa si cad loo mamnuucay.
Duruufo jira maahan in CHPW ama mid kamid ah shirkadaha la xiriira ama shirkadaha xiriirka la leh ay mas'uul ka yihiin wixii toos ah, aan toos ahayn, shil ah, khaas ah, ciqaab ama ciqaab ka dhalan karta isticmaalka, ama awood la'aanta isticmaalka, websaydhka CHPW. Waxaad si gaar ah u qiraysaa oo aad u oggoshahay in CHPW aysan masuul ka ahayn wax kasta oo sumcad-dilid ah, anshax-xumo ah ama anshax-xumo ah oo isticmaale kasta. Haddii aadan ku qanacsaneyn wax ka mid ah waxyaabaha loo yaqaan 'CHPW', ama qodob kasta oo ka mid ah Shuruudaha Isticmaalka, dawadaada kaliya iyo tan gaarka ah waa inaad joojiso isticmaalka degelkan.
Marka laga reebo sida lagu sharraxay haddii kale, dhammaan qalabka ku jira boggaga 'CHPW' waxaa loo diyaariyey oo keliya in lagu bixiyo macluumaadka ku saabsan CHPW iyo alaabteenna. CHPW waxay maamushaa oo ka shaqeysaa boggan xarunteeda dhexe ee Seattle, Washington, USA, mana sameyso wax matalaad ah in qalabkan ay ku habboon yihiin ama loo heli karo in lagu isticmaalo meelo ka baxsan awoodda gobolka Washington. Haddii aad boggan uga adeegsato meelo kale, waxaad masuul ka tahay u hoggaansanaanta sharciyada maxalliga ah ee lagu dabaqi karo.
Shuruudaha iyo xaaladaha warbaahinta bulshada
Adoo marinaya, daawanaya, ama isticmaalaya boggag warbaahineed oo bulsheed oo ay maamusho Community Health Plan ee Washington, faracyadeeda, ama la-hawlgalayaasheeda, isticmaaluhu wuxuu muujinayaa aqbalaadda shuruudaha iyo xaaladaha soo socda ee warbaahinta bulshada wuxuuna oggol yahay inuu sharci ahaan iyaga ku xidho
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington, kaabayaasheeda, iyo kuwa ku lammaan (halkan ka dib "CHPW") ma ansaxinayo macluumaadka kooxda saddexaad ee lagu dhajiyay bogagga warbaahinta bulshada ee CHPW. Faallooyin kasta, odhaahyo, ama ra'yi ku saabsan bogaggaas ma ansaxinayo CHPW, mana aha inay ka tarjumayaan aragtiyada, siyaasadaha, ama habraacyada CHPW. Macluumaadka, agabyada, iyo adeegyada ku jira bogagga warbaahinta bulshada ee CHPW waxaa la siiyaa isticmaaleha “sida uu yahay,” iyada oo aan la helin wax matalaad ah ama tilmaamaya ama dammaanad nooc kasta ah, oo ay ku jiraan dammaanad kasta oo ku saabsan baayac mushtarka ama jirdhis ujeedo gaar ah ama aan ku xadgudbin hantida aqooneed. CHPW wax matalaad ah ama damaanad qaad ah kama sameynayso wixii macluumaad ah ama macluumaad ah ee lagu dhajiyay bogagga warbaahinta bulshada ee CHPW ama isticmaalka isticmaaleha ah waxyaabaha ama waxyaabaha la soo dhejiyay ama haddii kale laga heli karo iyada oo loo marayo bogagga warbaahinta bulshada ee CHPW ma jabineyso xuquuqda dhinacyada saddexaad.
Isticmaalayaashu ma dhejin karaan mid ka mid ah bogagga warbaahinta bulshada ee CHPW ee sharci-darrada ah, lahaanshaha, khiyaanada, aflagaadada ah, cayda, sumcad xumada, fisqiga, hanjabaadda, aflagaadada, dhibaataynta, ama ku xadgudubka xuquuqda dhinac saddexaad, oo ay ku jiraan hantida caqliga, asturnaanta / xog qarinta, ama xuquuqda xayeysiinta. CHPW ma ogola mid ka mid ah dhaqamadaan waxayna xaq u leedahay inay isla markiiba ka saarto ama wax ka bedesho wax kasta oo ku saabsan ikhtiyaarkeeda.
Adoo ku soo gudbinaya waxyaabaha ku jira ama ku soo gudbinaya bogaga warbaahinta bulshada ee CHPW, isticmaalaha wuxuu siinayaa CHPW xaddidan, oo aan cidna ku xirnayn, oo aan lahayn wax lacag ah oo boqortooyo ah, joogto ah, aan laga noqon karin, iyo ruqsad buuxda oo ruqsad u leh inuu isticmaalo, soo saaro, wax ka beddelo, la qabsado, daabaco, tarjumo, abuuro shaqooyin ka soo jeeda laga bilaabo, loo qaybiyo, laguna muujiyo waxyaabaha noocaas ah adduunka oo dhan warbaahin kasta. Isticmaaluhu wuxuu kaloo ku raacsan yahay in CHPW ay xor u tahay adeegsiga fikradaha, fikradaha, iyo aqoonta uu adeegsadaha u siinayo CHPW barta warbaahinta bulshada. Isticmaaluhu wuxuu sidoo kale siinayaa CHPW xaqa isticmaalka magaca uu soo gudbiyey adeegsadaha ee la xiriira waxyaabaha noocaas ah. CHPW waxay xaq u leedahay inay wax ka bedesho waxyaabaha ku jira baraheeda bulshada waqti kasta, laakiin waajib kuma aha inay cusboonaysiiso wax macluumaad ah oo ku saabsan barahooda bulshada. CHPW ujeedkeedu ma ahan inay ka ururiso macluumaadka shakhsiyan lagu aqoonsan karo carruurta ka yar 13 sano.
Qalabka lagu dhajiyay bogagga warbaahinta bulshada ee CHPW maahan talo. Adoo ka dhigaya waxyaabaha ku jira bogagga warbaahinta bulshada ee CHPW ee ay heli karaan isticmaalaha, CHPW kuma hawlan tahay inay bixiso wax sharci ah, caafimaad, ama talo kale oo xirfadle ah.
Bogagga warbaahinta bulshada ee CHPW waa kuwo caam ah. Isticmaalayaashu ma dhejin karaan macluumaad caafimaad shakhsiyeed ama gaar ah, sida lambarrada siyaasadda, lambarrada sheegashada, lambarrada taleefannada, cinwaannada e-maylka gaarka ah, ama wixii macluumaad aqoonsi ee u gaar ah bogga warbaahinta bulshada ee CHPW. CHPW waxay xaq u leedahay inay ka saarto wixii fariimo baraha bulshada ah oo ay ku jiraan macluumaadkaas.
Isticmaalayaashu ma dhejin karaan wax xiriiriyeyaal ah ama waxyaabo kale oo ay ku jiraan fayrasyo ​​ama softiweerro xun ama haddii kale ku xadgudbayaan sharciyada federaalka ama gobolka. Isticmaalayaashu ma dhejin karaan xayeysiis ama codsi ganacsi. Qoraal kasta oo noocaan ah oo lagu daabaco bogagga warbaahinta bulshada ee CHPW waa laga saari karaa. CHPW waxay xaq u leedahay inay qaaddo talaabo kasta oo kale oo sharcigu u ogol yahay inay wax kaga qabato xadgudubyada qaybtan.
Mawduucyada ku jira bogagga warbaahinta bulshada ee CHPW (oo ay ku jiraan, aan xad lahayn, qoraalka, naqshadeynta, sawir gacmeedka, astaamaha, sawirrada, fiidiyowyada, iyo sidoo kale xulashadeeda iyo qaabayntiisa) ay soo gelisay CHPW waa milkiyad iyo milkiyad ay leeyihiin CHPW, shatiyeyaashayaga, ama saddexaad - bixiyeyaasha ka kooban qayb ahaan, waxaana ilaaliya xuquuqda daabacaadda, astaan ​​ganacsi, iyo sharciyada kale ee khuseeya. Isticmaal kasta oo kale oo ah waxyaabaha ku jira goobta, oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn, wax ka beddelka, qaybinta, gudbinta, waxqabadka, baahinta, daabacaadda, soo dejinta, shatiyeynta, wareejinta, ama iibinta, ama abuurista shaqooyin ka soo jeeda, wixii qalab ama macluumaadka laga helo goobta, ama isticmaalka goobta ujeeddooyin la tartamaya CHPW, ayaa si cad loo mamnuucay.
Bogagga warbaahinta bulshada ee CHPW waxaa ku jiri kara xiriiriyeyaal bogag kale oo internet ah, kuwaas oo qaarkood ay ka shaqeeyaan CHPW iyo kuwa kale oo ay ku shaqeeyaan dhinacyo saddexaad. Xiriirimahaan waxaa loo bixiyaa si ay ugu sahlanaadaan isticmaalaha iyo marin dheeraad ah oo marin looga helo macluumaadka ku jira. CHPW daruuri kama aheyn inay dib u eegis ku sameyso dhamaan macluumaadka ku jira bogaggan kale isla markaana mas'uul kama aha waxyaabaha ay ka kooban yihiin kuwa ama bogag kale ama badeecooyin ama adeegyo laga yaabo in lagu soo bandhigo kuwa ama bogag kale oo kale. Ka mid noqoshada xiriiriyeyaasha bogagga kale waa in aan loo arkin inay tahay oggolaansho ka kooban waxyaabaha ku jira bogagga shabakadda ee isku xiran. Shuruudo iyo shuruudo kaladuwan ayaa laga yaabaa inay khuseeyaan isticmaalka isticmaalaha bogag internet oo xiriir la leh.
CHPW waxay xaq u leedahay inay xannibo ama si kale uga mamnuucdo qof kasta inuu galo ama isticmaalo bogagga warbaahinta bulshada ee CHPW sabab kastoo ay doontaba ha noqotee.
Isticmaalayaasha ayaa ugu dambeyntii mas'uul ka ah waxyaabaha ay ku dhajiyaan bogagga warbaahinta bulshada ee CHPW, oo ay ku jiraan sharcinimada, kalsoonida, ku habboonaanta, asalka, iyo xuquuqda lahaanshaha wax kasta oo noocaas ah. CHPW mas'uul kama aha waxyeello toos ah, ama aan toos ahayn, gaar ah, shilalka, ama waxyeello ah oo ka dhalan karta adeegsiga isticmaalaha bogagga warbaahinta bulshada ee CHPW. Intaa waxaa sii dheer, isticmaaluhu wuxuu oggol yahay inuu difaaco oo magdhow siiyo CHPW iyo mid kasta oo ka mid ah saraakiisheenna, wakiillada, agaasimayaasha, wada-hawlgalayaasha, shati-bixiyeyaasha, bixiyeyaasha adeegga, iyo shaqaalaha, wixii lumis, mas'uuliyad, sheegasho, ama dalab ah, oo ay ku jiraan khidmadaha qareennada ee macquulka ah, oo ay soo saartay cid kasta oo saddexaad oo ay sabab u tahay ama ka timaaddo isticmaalkaaga boggaga warbaahinta bulshada ee CHPW ama jebinta ama eedeynta jebinta Shuruudahaan iyo Shuruudaha uu adeegsadaha adeegsanayo (oo ay ku jiraan, xad la'aan, jebinta wakiillada iyo dammaanadaha halkan lagu sheegay).
CHPW kama bixiso talo caafimaad boggeeda warbaahinta bulshada. Haddii aad raadinayso talo caafimaad, fadlan la xiriir xafiiska dhakhtarka ama wac 911 haddii ay xaalad degdeg ahi dhacdo.
Taariikhda Cusboonaysiinta Ugu Dambeysa: Juun 29, 2020